I-Woods Inn yimbali ye-bungalow imizuzu ukusuka kwidolophu yaseChattanooga. Indlu ibekwe kwindlela ezolileyo kwaye yabucala kakhulu. Kukuhambo lwemizuzu eli-10 ukuya eFrazier Ave kunye nebhulorho yesitalato iWalnut. Ilungele abo bafuna ukonwabela edolophini; nokuba ulapha kwimidyarho, iminyhadala, okanye iikonsathi, yindawo efanelekileyo yokuya ngasemanzini, imivalo, iindawo zokutyela kunye neevenkile.
Kukho igumbi lokulala eline queen bed kunye ne queen size couch efakwe aerobed kwigumbi lokuhlala. Igumbi lokuhlambela lisezantsi kweholo kufutshane nesango elingaphambili, alikho kwigumbi lokulala. Indlu yokuhlambela yahlaziywa ngo-2018. Kukho igumbi lokudlela elikhulu elinetafile enokuthi ihlale kwi-6 kunye ne-bar enezihlalo ezi-2 ezongezelelweyo. Ikhitshi yahlaziywa ngo-2020 kunye nezixhobo ezitsha ezibandakanya isitovu segesi kunye nehood. Kukho iveranda yelanga ngasemva kwendlu enetafile ephezulu ye-pub egqibeleleyo yokubukela izilwanyana zasendle okanye ukudlala imidlalo. Kukho umgangatho ongaphambili wendlu olungele ukonwabela imozulu eshushu yaseChattanooga kunye nokusela isiselo esibandayo. Kukho igrill yegesi ekhoyo ukuze isetyenziswe. Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kwi-WiFi, intambo, i-smart TV enekhono lokusasaza, amakhadi kunye nemidlalo yokuzonwabisa.
Le ndlu ikwingingqi yaseNorth Shore, isiqingatha semayile ukusuka eFrazier Ave. Kumgama wokuhamba ukuya eCoolidge Park kunye nomlambo, imivalo ephakathi kwedolophu kunye neendawo zokutyela, kunye neevenkile ezininzi ezinkulu kunye neendawo zokutyela eFrazier Ave. Ikwaluhambo olufutshane luka-Uber ukuya indawo eseMazantsi okanye eMLK. Ikufuphi nePublix kunye neevenkile ezithengisa ukutya kwe-Whole Foods.